नेपाल इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ३ फागुन २०७७)
कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट यस वर्ष शेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस शेयर र २ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव बीमा समितिबाट स्वीकृति र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् ।
कम्पनीले अघिल्लो आवको मुनाफाबाट गत वर्ष शेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर र २ दशमलव ८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रु. १० करोड २६ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रु. ८ करोड ७४ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो ।
आइतबार कम्पनीको शेयर मूल्य रु. ८५० कायम भएको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १६ रुपैयाँले कमी आएको हो ।
कम्पनीको ६२ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा डोजी आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्ने वा घट्नेमा अन्योल रहेको संकेत गर्छ ।
आरएसआई न्युट्रल जोन ६० दशमलव ४४ बिन्दुमा छ । यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन २० दशमलव ४५ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कादेखि टाढिएको छ । हालको मूल्यरेखा १४ दिने औसत मूल्यरेखा नजिक छ । आइतवारको शेयर मूल्य रु. ८५० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ७८३ मा टेवा पाउने र महँगिए रु. ९३५ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।